प्रदेश १ Archives – Page3of 31 – Samacharpati
कास्की काँग्रेसद्वारा आन्दोलनमा सहभागी सबैप्रति आभार व्यक्त
काेराेना विरुद्धको खोपको आयात प्रक्रिया सहज बनाउन भन्सार विभागले चाल्याे यस्ताे कदम
कृषि विकास बैंकको ५४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा खुल्ला रक्तदान तथा सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम
दश वर्षअघि धनुषामा गोली हानी हत्या गर्ने व्यक्ति सिरहाबाट पक्राउ
‘सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास छ, जे निर्णय गर्छ, स्वीकार्छौं’:- विष्णुप्रसाद पौडेल
ऋषिराजको ‘चुरीफुरी’ मा हाँस्यकलाकारको भीड
पोखराको पर्यटक बसपार्कमा चोरको बिगबिगी, ५ दिनमा ६ वटा ब्याट्री चोरी
सवारी लाइसेन्सको अनलाइन आवेदनमा कोटा प्रणाली हट्ने,ट्रायल दिनेलाई खुसीको खबर
सांसद मनाङ्गेले १ लाख लेबी फिर्ता मागे, जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, होटल खुले पनि ग्राहक आएनन्,कोरोनाको खोप लगाएका २३ जनाको मृत्यु
क्रियटिभ एजुकेशन फाउण्डेशन लिमिटेडका संचालक मनोज तिवारी भन्नुहुन्छ “नैतिकता गिराएर काम गर्न नपरोस”
कडा प्रतिबन्ध गरेको बेलायतमा अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक असर
कास्की माछापुच्छ्रेकी ममता गुरुङ जंगलमा मृत अवस्थामा फेला
माेरङमा थपिए एकैदिन १३० जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं, १२ असाेज । मोरङमा एकैदिन १३० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । कोशी अस्पताल र प्रदेश प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा मोरङका विभिन्न स्थानमा थप एक सय ३० जना थपिएका हुन् । संक्रमित हुनेमा ५१ महिला र ७९ पुरुष रहेका छन् । यो संख्या मोरङमा एकैदिन संक्रमित हुनेको हालसम्मकै धेरै हो । यो सँगै […]
विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित महिलाको मृत्यु
विराटनगर, ५ असोज । कोरोना सङ्क्रमित एक महिलाको मोरङको बूढीगङ्गास्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ । ताप्जेजुङ जिल्लाकी ३७ वर्षीया महिलाको विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहँदा आज बिहान ११ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुधीरसिंह राठौरले बताउनुभयो । उच्च रक्तचाप र कलेजोसम्बन्धी दीर्घ रोग भएकी महिलालाई गत भदौ २९ […]
महोत्तरी एक र मोरङमा दुई काेराेना सङ्क्रमितकाे मृत्यु
धरान, २९ भदौ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचारका क्रममा मोरङका दुई सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये कुनै दीर्घ रोग नभएका एक ४० वर्षीय युवकको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मोरङको धनपालथान–६ का ती युवकको आइतबार राति ८ः४५ मा निधन भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा निदेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उनलाई […]
बञ्चरो प्रहार गरेर आफ्नै आमाको हत्या गरे छोराले
दमक, २९ भदौ । झापाको कमल गाउँपालिका–७ मा आइतबार साँझ ७ बजेतिर छोराले आमाको हत्या गरेको छ । बाह्रघरे नजिकै मुसहर बस्तीका स्थानीय २१ वर्षीय दिनेश ऋषिदेवले बञ्चरो प्रहार गरी ५० वर्षीया आमा मीरा ऋषिदेवको ह त्या गरेको हो । मदिरा सेवन गरेर आएका दिनेशले आमासँग विवाद भएपछि बञ्चरो प्रहार गर्दा आमाको घटनास्थलमै ज्यान गएको […]
प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित एकै दिन सात जना पक्राउ
सुरुङ्गा, २८ भदौ । प्रहरीले प्रतिबन्धित लागू औषधसहित एकै दिन सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । दमक नगरपालिकाबाट चार केजी गाँजासहित शनिबार इलाम, माङ्सेबुङ–६ घर भई दमकमा डेरा गरी बस्ने २६ वर्षीय अर्पण राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई प्रहरीको विशेष टोलीले चार केजी २५ ग्राम गाँजासहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी […]
सदाबहार राष्ट्रिय टिकटक स्टार प्रतियोगिता घोषणा, बिजेताले डेढ लाख रुपैयाँ पाउने
सुनसरी, १२ भदाै । राष्ट्रिय स्तरको टिकटक स्टार प्रतियोगिता हुने भएको छ । ‘सदाबहार राष्ट्रिय टिकटक स्टार प्रतियोगिता ०७७’ नाम दिइएको प्रतियोगिताका लागि आवेदन सुरु भएको छ । प्रतियोगिता सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित रहेको सदाबहारा मिडिया प्रा.लि.ले आयोजना गरेको हो । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले १३ भदौमा सुरु भएको यस प्रतियोगिता २८ कात्तिकमा सम्पन्न हुने जानकारी […]
झापामा कोरोना संक्रमणबाट ८३ वर्षीय बृद्धको मृत्यु
झापा, १२ भदाै । झापामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हनेमा झापाको कमल गाउँपालिकाका–३ केर्खा बजारका ८३ वर्षीय बृद्ध रहेका छन् । झापाको कमल गाउँपालिकाका–३ केर्खा बजारका ८३ वर्षीय बृद्धको मृत्यु भएको हो । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनको उपचारका क्रममा आज विहान ४ बजे ज्यान गएको हो […]
हलेसीमा हिन्दु र किराँत संस्कारमा आधारित तीनवटा होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारी
खोटाङ, ११ भदौ। हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मालम्बीको सङ्गमस्थल खोटाङको हलेसीमा तीनवटा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा गठित हलेसी विकास समितिको पहलमा स्वदेश तथा विदेशबाट हलेसी घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा तीनवटा होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । महादेविस्थानस्थित तल्लो माल्खुमा किराँत र माथिल्लो माल्खुमा […]
चियापत्तीको मूल्य यो वर्षकै उच्च, चिया किसान दंग
विराटनगर, ९ भदाै । इलाम कन्यामका चिया किसान डम्बरबहादुर कटुवाल अहिले चियाको उचित मूल्य पाउँदा दंग छन् । बन्दाबन्दीले चिया विक्रीमा समस्या होला कि भन्ने चिन्तामा रहेका कटुवालजस्तै चिया किसान उद्योगले हरियो चिया प्रतिकिलो रू. ४० मै किनिदिएपछि उत्साहित भएका हुन् । सूर्योदय नगरपालिकाले नै किसानहरूको चियाको न्यूनतम मूल्य ४० रुपैयाँ तोकिदिएको छ । केही […]
बीपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु
सुनसरी, ३२ साउन । बीपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत ५० वर्षीया महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । एक सातादेखि उच्च ज्वरो, खोकी र श्वास–प्रश्वासमा समस्या आएकी ति महिलाको उपचारकै क्रममा शनिबार राति मृत्यु भएको हो । उनी साउन ३१ गते राति प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । मृतकको मेडिकल हिस्ट्रीमा भारतको दिल्लीस्थित एक अस्पतालमा मुटुको उपचार गरेको, […]
विराटनगरमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
विराटनगर, ३० साउन । कोशी अस्पताल विराटनगरमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिराहको विष्णुपुर गाउँपालिका– १ घर भएका ४० वर्षीय पुरुष रहेका छन् । उनको बिहीबार राति करिब सवा ८ बजे ति पुरुषको मृत्यु भएको बताइएको छ । उनी गम्भीर अबस्थामा अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको शरीरमा रगतको कमी […]
”टिकटक तिज क्विन २०७७ मा २६ जनाको प्रतिष्पर्धा, नतिजा २ गते सार्बजनिक हुने
ईटहरी, २८ साउन । तीज नजिकिदै गर्दा तीजका गीतहरु धमाधम सार्बजनिक भैरहेका छन भने यता सामाजिक संजालबाट तिजका विभिन्न कार्यक्रमहरुको को आयोजना भैरहेको छ । यस्तैमा परिकला मिडिया प्राली तथा डिथ्री अनलाइनले पनि सामाजिक संजाललाई प्रयोग गर्दै तीजको फरक कन्सेप्टमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रम सामाजिक संजाल मार्फत हुने एक प्रतियोगिता हो […]
एउटै गोत्रको बिवाह किन हुदैन ? कुन कुन थरका गोत्र एउटै हेर्नुहोस
नेकपा विभाजनमा गण्डकी प्रदेशमा कुन मन्त्री कता ? , प्रदेशको बिशेष अधिवेशन आज
लाइसेन्स कार्यालय पोखरामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द